Maxaabiis laga soo daayay Xabsiyo ku yaalla Hindiya oo Maanta Muqdisho la keenayo. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAMaxaabiis laga soo daayay Xabsiyo ku yaalla Hindiya oo Maanta Muqdisho la keenayo.
Maxaabiis laga soo daayay Xabsiyo ku yaalla Hindiya oo Maanta Muqdisho la keenayo.
March 3, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo xubno katirsan Dowladda Federaalka ayaa wadanka Hindiya kasoo qaaday 77 Maxaabiis Soomaali ah oo dalkaasi ku xirnaa.
Diyaarad gaar ah oo loogu talagalay in lagu qaado maxaabiistaas ayaa ku wajahan Magaalada Muscat ee Caasimadda dalka Cumaan, si kadib ay ugu soo gudbiso Magaalada Muqdisho Caasimadda Soomaaliya.
Maxaabiista ayaa ah qeybtii labaad ee laga soo daayo Xabsiyada ku yaalla Magaalada Mumbai ee Caasimadda India, waxayna ku qaateen muddo xabsiyo lagu xukumay.
C/risaaq Faarax Cali (Taano) Danjiraha Soomaaliya ee Cumaan ayaa laanta Afsoomaaliga ee VOA-da u sheegay in Maxaabiistaan ay iska kaashadeen Xeer ilaaliyaha Qaranka, Wasaaradaha Cadaaladda iyo Arrimaha Dibadda iyo Safaaradda Soomaalida ee dalkaasi.
Dhanka kale Danjire Taano ayaa sheegay in uu socdo wada hadal lagu doonayo in lagu sii daayo 34 Maxaabiis Soomaali ah oo ku xiran isla wadanka uu Soomaaliya u fadhiyo ee Cumaan.
Falalka lagu heysto Maxaabiistaan waxa uu ku tilmaamay in ay kamid ahaayeen Kooxaha Burcad Badeedda ee ka qowleysta Biyaha Soomaaliya iyo Kuwa Caalamiga ah ee ka baxsan.
Xukunkooda ayuu ku sheegay in uu yahay Xabsi Daan, balse Cumaan Xabsi daainkooda ayuu ku sheegay in uu yahay 25 sano.
Dowladda Soomaaliya ayaa horay Muqdisho u keentay Maxaabiis Soomaali ah oo muddo ku xirnaa dalka Hindiya, kadib markii ay qaateen Xukunno ay ku ridday Maxkamad ku taalla Mumbai.
Sawirro:- Shirkii looga hadlayay Arrimaha Soomaaliya oo Uganda lagu soo gaba-gabeeyay.
Jaamacadda Carabta oo lacag ugu deeqday Somaliya
40,807 total views, 1,560 views today
40,807 total views, 1,560 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
40,880 total views, 1,560 views today
40,880 total views, 1,560 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
40,892 total views, 1,560 views today
40,892 total views, 1,560 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
40,917 total views, 1,561 views today
40,917 total views, 1,561 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
40,947 total views, 1,560 views today
40,947 total views, 1,560 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]